Cishe ngesikhathi ngiqala ukunaka ukuthi ikhofi lami linambitheke kanjani ngesikhathi engithole ngaso i- INorfolk Coffee & Tea Inkampani. Kuze kube namuhla ngizokutshela ukuthi ayikho into efana nokuthola ubhontshisi othosiwe ngqo kusuka kuhhavini.
Uma uwucabanga njengamagagasi amasha, indawo yesimanje yama-snobs okuhlangana kuwo kanye ne-hobnob, awusoze waqhubekela phambili eqinisweni. Ingaphakathi lalibukeka njengefektri ehlukunyezwayo… kwakukhona ukumbozwa kwekhofi nothuli lwamantongomane kukho konke owawukubhekile. Uvele wangena, wayala isikhwama sakho sezizathu, waphuma. Angazi ukuthi ubhontshisi uvelaphi, kodwa babethusa kakhulu. Abanikazi bangifundisa ngabenzi bekhofi abasha abebephume ngaphandle bengenazo izishisi nama-carafes angafakiwe. Alikho ikhofi elishile. Mmmm.
Cishe ngalesi sikhathi, ngathuthela eDenver ngashiya okutholakele kwami ​​okusha ngemuva. EDenver, ngifune ama-roasters ekhofi kepha bekungafani. I-Starbucks yayifikile edolobheni, noma kunjalo, futhi ngathola ukunambitheka kobhontshisi oshile bama-bucks. Angicabangi ukuthi ngike ngajwayela izindleko noma ukunambitheka kwalabo bhontshisi, noma kunjalo! Bengisebenzisa imali ephindwe kayishumi kunekhofi kunalokho ebengikade ngikwenza!
Ukuhlanganyela ku-Starbucks lapho beqala ukuvula kwakumnandi kakhulu. Izihlalo ezinethezekile kuyo yonke indawo, okwenza kube yindawo enhle yokubamba umhlangano ongazenzakaleli. Izihlalo ezinethezekile zimeme abantu ukuthi bachithe isikhathi esithe xaxa e-Starbucks, noma kunjalo. Ngifundile ukuthi izindawo eziningi zokuthengisa zifaka izihlalo ezinzima ukuze abantu bangahlali isikhathi eside. I-Starbucks ishintshele ezitolo ezinkulu nasezihlalweni eziqinile ezinesihlalo esinethezekile nary nxazonke.
UJane angahle abe nokuhluma kwezinwele eziluhlaza nokubhoboza okumbalwa ezindaweni ezingalingani, kepha njengoba edonsa isibhamu, ubuke njengoba eqhuba ubuciko bakhe. Uxoxa ngezinto ozithandayo nangazithandi ngaphandle kwezinketho zesiphuzo bese enza izincomo ezimbalwa kuwe ngokuya ngengcebo yakhe yolwazi. Uzizwe upholile ngokuba nje ukhona futhi unakwe. Uzizwe ukhethekile.
Ngangilalela umsakazo lapho ngidonsa ngibahambise ngibanikeze imali yami bese ngiya emsebenzini. Akukho ukubingelela, akukho ngxoxo ngesimo sezulu. Mina nje nemoto yami. Umlingo wawungasekho. I-Starbucks, isipiliyoni njengoba ngangisazi, sasishonile.
Iqiniso bekungukuthi angazi ukuthi ngake ngaba seStarbucks ngempela ngenxa yekhofi. O - bengidinga ukulungiswa kwami ​​njengawo wonke umuntu, kepha bengithandana nomkhiqizo, isitayela, ubuntu bendlu yekhofi. Ngangikuthanda ukuya lapho ngoba ngangizizwa ngibalulekile. Futhi lapho ngikhokha u- $ 5 ngesiphuzo esikhethekile, ngazizwa ngibaluleke kakhulu.
Endaweni ethile endleleni, i-Starbucks yaqala ukushefa okhethekile ngenzuzo nokusebenza kahle. Bayeka ukwenza me uzizwe ubalulekile. Bayeka ukwenza me uzizwe ukhethekile. Bayeka ukuba abakhethekile. I-Starbucks yindaba emangalisayo - bakhuphule intengo yesiphuzo esijwayelekile futhi basithinta sonke. Kepha abakwazanga ukusigcina. Ukukhula, inzuzo kanye nokusebenza kahle kuthathe izintambo kwagcina sekuqede yonke into ezitolo ebezihlukile.
Ngicabanga ukuthi sithathe uhlobo lwe-hit isipikili ekhanda, kusho uBrad Stevens, iphini likamongameli wokuphathwa kobudlelwano bamakhasimende. Kulula ukusebenzisa i-baristas futhi kulula ukuthi amakhasimende akuqonde.
IMHO, Ngicabanga ukuthi uStarbucks ushaye owamanqamu isipikili ebhokisini. Azisekho ezikhethekile ngokwanele ukukukhokhisa u- $ 5 ngesiphuzo, manje sebephendukela ekwehliseni isaphulelo somkhiqizo owodwa omkhulu kunabo bonke abawuthandile. Usuku olubuhlungu ku-Starbucks.
Ngibhala lokhu ngivela endlini yami yekhofi engiyithandayo emhlabeni, okuyisitolo esizimele. Namuhla kusihlwa, u-barista Cassie wami ungihlanganisele isiphuzo esimnandi sokusajingijolo sase-Italiya ngokusekelwe engxoxweni yezinto engizithandayo nengingazithandi (ukuthi wazi kahle). Futhi u-Alayna wangenzela isangweji lenkomo eliyosiwe elishubile elimnandi kwi-bagel ethosiwe (hhayi kwimenyu).